Inona no azoko atao amin'ny lisitra vokariko amin'ny Amazon.com noho ny fandrosoana fandrosoana?
Raha ny filalaovana tombontsoa amin'ny vidin'ny vola Amazon.com ary ny fametrahana ny fandrosoana dia maharitra amin'ny fikaroham-bokin'ny mpanjifa mivantana ny fahombiazan'ny fahombiazana. Midika izany fa ny mijanona mialoha ny lalao amin'ny Amazon.com miaraka amin'ny laharana mba ho hita eny an-tampon'ny tohatra eny an-tsena - izay ilainao dia ny manatsara tanteraka ny lisitry ny vokatrao. Saingy ny tetika dia ny manana ny zava-drehetra eo amin'ny toerana tokony hahafantaranao hoe inona marina ary aiza no atao manokana isaky ny mamerina lisitry ny fanitsiana lisitra. Ity ny fomba ahafahanao manao izany - ampiasao ity torolàlana fohy ity mba hifantohana tsara hatrany am-piandohana, tsy handanilany na dia iray minitra fotsiny aza ny fotoana sarobidy na ny ezaka kely indrindra.
Raha efa milalao tsara amin'ny Search Engine Optimization (SEO) ianao, Ny SEO ambony dia miteny fa ny votoatiny dia ny mpanjaka mandrakariva. Midika izany fa azo antoka fa misy votoaty hita ao amin'ny tranonkala dia ny zavatra mahazatra no mahatonga ny fanatsarana fahombiazana ho an'ny fahitana tsara kokoa amin'ny aterineto. Ary ny votoatin'ny fanamafisana araka ny tokony ho izy dia avy amin'ny fampiasana amim-pahendrena ary ny fametrahana tsara ny teny fototra ifantohan'ny lasibatra. Noho izany, raha te-hahita ny lisitra tsara azo atao ianao amin'ny Amazon.com sy ny tombony anananao miaraka amin'ny sotro volafotsy iray - ny fikarakarana fikarohana lalin-dàlana tsara dia tokony ho laharana manaraka anao.
Noho izany, avelao hiatrika izany - ny fananana sokajin-teny noforomporina noforonina dia tena zava-dehibe mba hahatonga ny lisitry ny vokatra ho anao Amazon.com top ny fikarohana mpikaroka. Izany no mahatonga ny fikarohana fikarohana ho an'ny tombontsoanao manokana tsy mandany fotoana be loatra, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fitaovam-pikarohana manaraka: Google Keyword Planner (fanombohana tsara amin'ny classe taloha taloha maimaim-poana sy amin'ny fanantenana tsara ho an'ny Pay-Per manaraka anao -Karazà fampiratiana), ary koa ny teny Merchant, AMZ Tracker, Scope, ary KeywordTool.io (mifantina fotsiny amin'ny voalohany izay tianao indrindra, satria ny fitaovana voatondro dia azo antoka sy ampiasaina ).
Fa maninona no tokony hanomboka manokana amin'ny Toolword Planner ianao amin'ny alalan'ny fitadiavam-bola goavana manerantany, ary avy eo dia mandehana amin'ny fandraisana an-tànana mpiara-dàlana maika sy mifanentana kokoa? Tsotra fotsiny satria rehefa tonga amin'ny Amazon.com sy ny algorithm misy azy io, dia misy karazan-teny roa samihafa nekena ho azy - ireo teny fototra fototra sy ireo miafina
Primary Keywords - dia natao hampiseho mivantana mivantana, ohatra amin'ny lohateny vokariny, famaritana, teboka momba ny vokatra, sns.
Hidden Keywords - Ny sokajy ny teny fanalahidy dia miaina ao ambadiky ny tsenan'ny Amazonia. Raha mbola tsy hita maso izy ireo amin'ny mpivarotra tena izy, ary ny motera fikarohana, ny teny fanalahidy miafina dia mbola manao ny teniny ary manampy ny lisitry ny vokatrao dia tsara laharam-pahamehana.
, ary ny fitenim-paritra (sôkôla), ary ny teny fanevatevana, Listing Anatomy on Amazon.com to D Tonga eo amin'ny toeranao
Raha vantany vao vita ny dobo filoham-pandaharanao voafantina dia izao no fotoana ahafahanao mahazo ny zava-drehetra miaraka amin'ny pejy antsipirihanao. Ary ny rafitra fototra amin'ny pejy momba ny vokatra izay hanatsara ny toetrantsika dia mifototra amin'ny singa manan-danja mitovy ihany. Mihevitra izy ireo fa tokony hihomehezana amin'ny teny fototra lehibe indrindra - ny voalohany sy ny zava-dehibe - eto no ilàna ny fisainanao mazava tsara any.
Listing Lohateny izay mandrakotra ny foto-kevitra lehiben'ny fivarotana.
Bullet Points manome famaritana vokatra madio sy mazava ary mampiasa toro-hevitra.
Product Description izay misy marina ny dikan'ny Bullet Points.
Sary lehibe manohana ny vokatra rehetra mba hanomezana fanazavana an-tsary mahaliana ho an'ny mpivarotra mivantana.
Tetik'asa fanatsarana ho an'ny Amazon.com Ranking Promotion
Tsy ilaina ny milaza izany Ny lohatenin'ny lisitry ny vokatrao dia angamba ny toerana tena manan-danja indrindra ao izay mila ampidirina amin'ny teny fototra fototra faran'izay haingana. Mariho anefa, fa tsy tokony hanana ny lisitra famokarana vokatrao miaraka amin'ny teny fanalahidy ianao. Noho izany, mba hahazoana antoka fa ny hevitry ny vokatrao dia misy dikany, manao fanamarinana indroa mba hahazoana ny zava-drehetra amin'ny toetoetrany manaraka:
Mametraha ny teny fototra fototra eo am-piandohana amin'ny fampihenana ny lanjan'ny lanjany.
Ny halavan'ny vokatra dia ahazoana litera 200..Noho izany dia tsy misy afa-tsy ny manapa-kevitra hoe hafiriana izany.
Ny litera voalohan'ny lohateny tsirairay dia tokony halefa foana.
Ny tarehimarika dia tokony ho marika eo amin'ny isa (oh: 100 dia ho tsara, ary zato - tsy misy mihitsy).
Na dia eo aza ny mari-pamantarana nomerika momba ny fandrefesana ny sambo, dia tsy tokony ho zava-dehibe velively ny haben'ny vokatra (mazava ho azy, raha tsy misy toetra tena manan-danja sy tena ilaina).
Saika ny zavatra mitovy amin'izany dia ny famaritana ny loko - tsy ilaina ny voasoratra ho an'ny vokatra rehetra, fotsiny ho an'ireo zavatra ireo.
Mety efa fantatrao izao, fa mbola hanao lisitry ny fanolorana aho - farafaharatsiny noho ny fahafenoany. Noho izany, vantany vao tsindrio ny vokatra lisitra ao amin'io toeram-pivarotana be mpividy io - ary ianao dia mipetraka mivantana amin'ny sehatra pejy amin'ny bala amin'ny bala. Araka ny fitsipika voalazan'ny Amazon.com , mandinika ireto torohevitra manaraka ireto rehefa mifidy izay kilalao amin'ny bala mifanaraka aminao tsara indrindra:
fampahalalam-baovao mahazatra ary zavatra hafa.
Ny sisa amin'ireo fampahalalana an-tsoratra dia voatanisa amin'ny lafiny lehibe ihany.
Tanisao ireo fiasa lehibe sy tombontsoa entina amin'ny fomba fohy, madio ary mendrika.
Ny zava-drehetra momba ny famaritana ny vokatra sy ny fanamafisana ny sary dia fanazavana tena. Izany no mahatonga ahy hampiseho anao fehintsoratra fohifohy momba ny fitrangan-javatra mivaingana indrindra ary TSY manana hevitra marim-pototra:
Product Description - manan-karena amin'ny teny fanalahidy, be unique. Raha ny fandefasana ireo hevi-dàlana lehibe amin'ny mpanjifa, ny famaritana vokatra tsara indrindra dia tokony handrakotra tanteraka ny angon-drakitra voatahiry rehetra.
Product Images - ny hany faneriterena dia ny fahafahana mametraka ny lisitry ny vokatra rehetra amin'ny Amazon tsy mihoatra ny sary sivy fanampiny. Angamba tsy misy mpitaingina, fa mbola manoro hevitra foana aho ny handinihana manokana ny fampidinana, ny fomba fiainana sy ny fampiasana ny vokatra isan'andro - ary vita izany Source .